Myanmar IT Resource Forum » ADMINISTRATION BOARD » » Help and Feedback » နာမည် ပြောင်းချင်ပါတယ်
1 နာမည် ပြောင်းချင်ပါတယ် on 12th March 2010, 10:33 am
ကျွန်တော် က ဒီ forum မှာ အသစ်ပါ။ နာမည်လေး ပြောင်းချင်လို့ပါ။ ကျွန်တော် profile မှာ ပြောင်းလို့ မရလို့ပါ။ admin ကို request လုပ်ပြီးမှ ချိန်းလို့ရမယ် ဆိုရင် လည်း ကျွန်တော် နာမည် ကို radiant ကနေ မှော်မျက်လုံး လို့ ချိန်းပေးပါ ခင်ဗျာ
2 Re: နာမည် ပြောင်းချင်ပါတယ် on 12th March 2010, 11:12 am
Admin လာရင် ပြောင်းပေးလိမ့်မယ်
3 Re: နာမည် ပြောင်းချင်ပါတယ် on 12th March 2010, 3:38 pm
တော်ကြာ မေ့နေမှာ ဆိုးလို့ 
4 Re: နာမည် ပြောင်းချင်ပါတယ် on 13th March 2010, 3:50 pm
ပြောင်းပေး ကြသေး ဘူးနော်
5 Re: နာမည် ပြောင်းချင်ပါတယ် on 13th March 2010, 3:53 pm
Sorry ပါဗျာ...ကျွန်တော် reply ပြန်ဖို့ Con ကျသွားတာနဲ့ မေ့သွားတာ... ကျွန်တော်ရယ် ကို ဇီးရိုးကိုးလ်ရယ်ပြောင်းကြည့်ပြီးပါပြီ Username was too long. ဆိုပြီး Error ပြနေလို့ပါ.... နောင်တော် $ƴǩǾ လာရင်တော့ သူပြောင်းပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ.... Username length ကိုသူ ကန့်ထားလားမသိဘူး...သူက Founder ဆိုတော့ Permission ပိုရှိလို့ပါ ခဏသည်းခံပေးပါ.
6 Re: နာမည် ပြောင်းချင်ပါတယ် on 15th March 2010, 12:13 pm
မှော်မျက်လုံး >> MagicEyez
ဟိဟိ။ UserName Default Length ကို မပြင်ဘဲ အစ်ကို့နာမည်ပြင်လိုက်တယ်။
7 Re: နာမည် ပြောင်းချင်ပါတယ်